Bakhala Ngokunganakwa Abazali Bezingane Ezashona – eHowzit
Bakhala Ngokunganakwa Abazali Bezingane Ezashona
ABAZALI bezintombi zoMhlanga ezashona engozini yebhasi eyayibuya kulo mkhosi ngonyaka odlulebadukuza ebumnyameni ngecala lomshayeli webhasi njengoba bethi kuze kube manje akekho obazisangokuqhubekayo nesinxephezelo abakaze basithole.
Omunye wabazali okunguMnuz Jabulani Mnguni owashonelwa ngamadodakazi amabili uNoxolonoNondumiso, uthi ngisho uMnyango wezokuThutha kaMnuz Willies Mchunu akusekho ukuxhumana nawoukuze bathole incazelo.
UMnguni ongowaseMthwalume uthe bayahlangana baludingide lolu daba nabanye abazali abalinyalelwayizingane zabo kule ngozi ngoba bakhelene.
Uthi ekuxoxeni kwabo kuvela ukuthi akekho noyedwa kubo owaziyo ukuthi kwenzekani bonkebasebumnyameni.
“Mina ngalinyalelwa unkosikazi wami ogcine esehamba ngesihlalo esinamasondo kwashona namadodakazi amiamabili. Kusuka lapho ngangithi sizobona umthetho usebenza kumshayeli webhasi okuyinto esasiyithenjiswewuMchunu ngesikhathi ayehlangene nathi emakhazeni eShowe. Kunalokho kuthule kanti nabeRoad Accident Fund sebekhuluma okunye njengoba bethi ngeke sinxeshezelwe ngoba izingane zethu zazingebona abantuabadala abondla imindeni,” kusho uMnguni.
Enye yamadodakazi akhe okunguNoxolo yayenza unyaka wokuqala eDurban University of Technologyezifundweni zeHospitality.
Echaza uMnguni uthe okubaxakayo ngukuthi uMchunu wabaxwayisa ngokuthi akumele basebenzise abanyeabameli uma sebefaka izicelo zokunxeshezelwa kodwa kumele bagxile kulabo beRoad Accident Fund ngobalaba bangamankentshane bazobagila.
“Lokhu ayekusho akusenzeki kunalokho laba bameli esasithenjiswe bona sibabona sekuyibona abadlala ngathinjengoba sesitshelwa ukuthi izingane zethu ngeke zinxeshezelwe ngoba bezingebona abantu abadala ababhekeimindeni,” usho kanje.
Uthi okubaphethe kabi ngukuthi umshayeli weloli eyadala isibhicongo ezimpambanweni zomgwaqo kuFieldsHill okuyingozi eyenzeka kamuva babona icala lakhona liqhubeka futhi kuhlale kuzwakala ukuphawulakoMnyango wezokuThutha kodwa kule yoMkhosi woMhlanga abezwa lutho.
Uqhube wathi abazi nokuthi kwenzekani ngomshayeli webhasi elalimaza labulala izingane zabo futhi akusekhongisho izikhulu.
Le ngozi yenzeka eNdundulu ngaseNkwalini lapho ibhasi kuthiwa umshayeli wayo wakhala ngokuthiisiphelelwe amabhuleki.
Lo mshayeli kwavela ukuthi wayengenalo igunya lokushayela ibhasi kodwa wacelwa omunye ukuba ayiqhubengoba umshayeli wokuqala wayeseboshwe ngamaphoyisa ngenxa yokutholakala edle amanzi amponjwana.
Ngemuva kwale ngozi eyashaqisa isizwe sonke kwabe sekwenzeka eyaseFields Hill kanti yona icala lomshayeliwakhona liyaqhubeka enkantolo yasePinetown.
Ngesikhathi kuthintwa abakwaRoad Accident Fund ukuze baphawule ngalokhu abazange batholakale futhinezingcingo zabo bezingangeni.
Umkhulumeli woMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal, uMnuz Kwanele Ncalane, uthe njengoMnyangobalwenza olwabo ucwaningo baludlulisela emaphoyiseni.
“Siyakuqonda ukuthi amaphoyisa asaluphenya udaba futhi sethemba ukuthi azoluphothula ngokushesha ukuzekuphothulwe lolu daba,” kusonga uNcalane.